Ny tontolon' IkalaFanja: Aretin-damosina: AOKA IZAY ✋🏼
Publié par Ikala Fanja à 10:09
Michelle Rabe 5 avril 2016 à 10:36
Tiako be ity lahatsoratra iray ity. Za koa dia mpanao miadana eny indraindray fa ny ahy indray,tsy hitako ny ilazako azy fa, pour détendre les muscles, rehefa vao mifoha iny. Fa dia hitako maivamaivana avy eo, tsy mahavatra isan'andro anefa aho fa rehefa hitako dy tsapako fa mavesabesatra dia mba manao izay vita.
Mirary soa akia dia bà betsaka aa ����
aina vicky 5 avril 2016 à 11:35
Ka na tsy isan'andro aza henon'ilay vatana ihany aky a! Toy ny mandeha milomano izany anie, mitsotsotra daholo izay mivokona rehetra any. Fa mahafinaritra be koa Ilay mieritreritra hoe adino hatreo ny fanantainana. Ndry koa mbola tanora kely dia mbola tsara vatana 😉. Misaotra aky namaky a! Ba be dia be 😘😘😘
Izay Tia Maquillage 11 avril 2016 à 08:46
ohh misaotra betsaka fa tena ilaiko ity zavatra zarain'Ikala Fanja ity. Misaotra betsaka dia tongava soa ny zazakely amin'ny fotoanany :)